'IT: Chitsauko Chechipiri' Inosanganisira Iconic Adrian Mellon Scene, Inosimbisa Munyori
musha Horror Varaidzo Nhau 'IT: Chitsauko Chechipiri' Inosanganisira Iconic Adrian Mellon Scene, Inosimbisa Munyori
by Michael Carpenter Dai 13, 2019
by Michael Carpenter Dai 13, 2019 1,203 maonero
Seye fan hombe yenhau yaStephen King IT, zvakakurumidza kuve pachena kuti hatife takawana chinja yakatendeka. Ose ma1990 miniseries uye director Andy Muschietti's 2017 movie yakatsauka kubva mubhuku nenzira hombe, uye IT: Chitsauko Chechipiri inotaridzika kuita zvakafanana.
Kuisa parutivi chokwadi chekuti pane zvinhu zvishoma zvandisingade kuona zvakachinjika, nekuda kwezvikonzero zviri pachena, ndauya kuzowirirana nenyaya yekuti hapana kuchinjika kuchabata zvakakwana bhuku raMambo. Kutendeseka, pamwe izvo ndezve zvakanakisa, nekuti isu takatove taverenga iyo nyaya.
Kutenda kune nyowani THR kubvunzurudzwa ne IT: Chitsauko Chechipiri munyori wechiratidziri Gary Dauberman hazvo, isu tinogona kuzorora zviri nyore tichiziva kuti kanokwana kamwe chete iconic kuteedzana ichaita iyo inotevera firimu. Dauberman anosimbisa kuti kupondwa kwaAdrian Mellon kuchachinjwa.
"Chiitiko chemufananidzo chiri mubhuku uye chataida kuisa mumuvhi." Iko kurwisa kwekutanga muzuva ranhasi Derry uye kunoisa danho rekuti Derry ave chii. Iko kufurira kwaPennywise kunyangwe paanenge achivata, uye zvakaipa chaizvo zvinoitika kuna Adrian. Vanodheerera ava vachishanda naPennywise zvainge zvakakosha kuti isu tiratidze. ”
Kune vashoma vasati vamboverenga IT, Adrian Mellon aive murume ngochani kunze nemumwe wake Don paakarwiswa neboka revapambi vanoita zvevanovengana. Mellon akakandwa pamusoro pebhiriji ndokugogodzwa asina chaanoziva, ndokuzopedzisa nekutyisa akamirirwa naPennywise.
Ichi chiitiko chakashayikwa zvachose ne1990 miniseries, kunyange hazvo chiri chechokwadi, aya maviri mabhaisikopo akabatanidzwa ane angangoita mamwe maawa matatu ekuona screentime yekushanda nawo. Ndinovimba Dauberman, Muschietti, nevashandi vanoita izvi zvakakosha uye zvinotyisa subplot kururamisira.